My freedom: The Star
ဒီဇင်ဘာလထဲ ရောက်လာပြီ... ဘာလိုလိုနဲ့ (၂၀၁၄)တောင် ကုန်တော့မယ်။ အချိန်တွေကုန်တာ မြန်လိုက်တာ။ နှစ်ကုန်ခါနီးပြီဆိုတော့ ထုံးစံအတိုင်း ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြန်သုံးသပ်တဲ့ ပိုစ့်တစ်ပုဒ်တော့ ရေးသင့်တယ် ထင်တယ်နော်။ ဖြစ်ပြီးတာကို ပြန်သုံးသပ်ရတာ လွယ်သလောက် ရှေ့ဆက်ဘာအစီအစဉ်ရှိလဲဆိုပြီး အနာဂတ်အတွက်မေးလာရင် ဖြေစရာအဖြေ မရှိဘူး။ ဟိုးးအဝေးကြီးအတွက် တွေးထားတာတွေ မရှိဘူး။
မြန်မာစာသင်တန်းက အခုလောလောဆယ် ကျောင်းပိတ်ထားတယ်လေ။ ဒါပေမယ့် ဘုန်းဘုန်းတွေသင်တဲ့ ယဉ်ကျေးလိမ္မာသင်တန်းရှိတယ်။ ဆရာမအင်အားနည်းတယ်ဆိုလို့ တနင်္ဂနွေနေ့က ဘုန်းကြီးကျောင်းသွားပြီး ကူသေးတယ်။ အဲ့နေ့က ကျောင်းသားလည်း နည်းတာဆိုတော့ ကူတယ်လို့လည်း မမည်ပါဘူး။ ဘုန်းဘုန်းတွေ သင်တာကို ကိုယ်ကကလေးတွေနဲ့ နောက်ကနေ ထိုင်ပေးနေတာလောက်ပဲ။ နောက်ပြီး ကလေးတွေကလည်း (၉)နှစ်၊ (၁၀)နှစ်အရွယ်လေးတွေဆိုတော့ ဘာမှသိပ်လုပ်ပေးစရာမလိုတော့ဘူး။ ကန်ဒီမြန်မာစာသင်ပေးတဲ့အခန်းက ကလေးတွေဆို (၄)နှစ်၊(၅)နှစ်အရွယ်လေးတွေ။ ထိုင်ငိုနေရင်လည်း ပေါင်ပေါ်တင်ချော့ရတယ်။ ပြောရင်းသူတို့ကို သတိရလာပြီ ^_^
ပါဋိအသံထွက်တွေကို အင်္ဂလိပ်လိုစာလုံးပေါင်းပြီး လိုက်မှတ်နေတဲ့ ကလေးတွေကြည့်ပြီး "သူတပါးနိုင်ငံမှာ ကြီးပြင်းရတဲ့ ဘ၀တွေပဲ"လို့ အတွေးဝင်တယ်။ ဒီနိုင်ငံမှာကြီးပြင်းတဲ့ကလေးတွေရဲ့အမူအကျင့်က မိဘတွေအပေါ်မှာ အများကြီးမူတည်တယ်။ မိဘတွေရဲ့ သွန်သင်နိုင်မှုပေါ်မူတည်ပြီး မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု၊ လူကြီးမိဘကိုရိုသေတတ်မှုအလေ့အထ ကွာခြားတာတွေကို ကလေးတွေမှာ တွေ့ရတယ်။
ဒီလထဲမှာ အမေလာလည်မယ်... ပျော်စရာကြီး။ တစ်ခုပဲ... အမေတစ်ယောက်တည်းလာမှာဆိုတော့ ကန်ဒီတို့အလုပ်သွားရင် သူတစ်ယောက်တည်း အိမ်မှာပျင်းနေမှာ... ဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲလည်း မသိဘူး(T_T)။ ဒီမှာက သိတဲ့အတိုင်းပဲ တနေ့လုံးအလုပ်သွား... အိမ်မှာ အိပ်ချိန်လောက်ပဲရှိတာ။ သူပျင်းနေတော့မှာပဲ(>.<)။ ရန်ကုန်ကနေ ဘာတွေမှာရမလဲ စဉ်းစားရမယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရက်က အိမ်က Air Con ရေကျလို့ ပူပူလောင်လောင်နဲ့ အိပ်ရတယ်။ ဒီနေ့မှ SGD 40 ပေးပြီး သန့်ရှင်းရေးလုပ်လိုက်တာ ကောင်းသွားတယ်။
စိတ်တိုစရာတစ်ခုပြောပြရဦးမယ်။ ကန်ဒီ့ဖုန်းနံပါတ်ကို တော်ရုံဘယ်သူ့မှ မပေးတတ်ဘူး။ ဟိုနေ့က ရန်ကုန်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ Viber ကနေ Message တွေ လာပို့တယ်။ အစကတော့ ကိုယ်နဲ့သိတဲ့လူထင်လို့ ဘယ်သူလဲ ဘာလဲမေးနေသေးတယ်။ Message ပို့ရင်းပို့ရင်း ကိုယ့်ကိုသိတဲ့ပုံမပေါ်တဲ့ ဖုန်းသရဲလို့ ထင်တာနဲ့ Reply မလုပ်တော့ဘဲ နေတာကို Reply မလုပ်လို့ဆိုပြီး လာဆဲတယ်။ အဲ့ဒါနဲ့ နောက်ဆုံး Block ပစ်လိုက်တယ်။ တော်တော်အမြင်ကတ်ဖို့ကောင်းတယ်။ အဲ့လို အရမ်းအားနေပြီး Message ပို့၊ ဆဲတဲ့လူတွေကလည်း ရှိသေးတယ်။
ဒီနေ့အလုပ်ကပြန်လာတော့ ရေမချိုးခင် ထုံးစံအတိုင်း အိပ်ယာပေါ်လဲပြီး ခဏနား၊ YouTube ကြည့်နေတုန်း ဟိုဘက်ခန်းက အစ်မက "ထ ထ အပျင်းထူမနေနဲ့... ရေချိုး၊ ထမင်းတူတူစားမယ်"ဆိုပြီး လှမ်းခေါ်တယ်။ ဘာရယ်မဟုတ် နွေးနွေးထွေးထွေးလေး ခံစားရတယ်။ ကန်ဒီ့ကို အဲ့လိုတစ်ယောက်ယောက်က ဂရုတစိုက် ထမင်းစားဖို့ခေါ်တာမျိုး မကြားရတာ နှစ်နဲ့ချီနေပြီ ထင်တယ်။ အဲ့ဒီအစ်မ ကန်ဒီတို့အိမ်ကို ပြောင်းလာကတည်းက ကန်ဒီနဲ့ထမင်းတူတူစားဖြစ်တာ များတယ်။
ဒီနေ့ ကြွားစရာရှိတယ်။ ကန်ဒီ Compliment Reward ကြယ်လေးရတယ်(^_^)။ လေးယောက်ပဲပေးတာ ကန်ဒီပါတယ်(:D)။ ကျန်တဲ့သုံးယောက် Excited ဖြစ်မဖြစ်တော့ မသိဘူး... ကန်ဒီတစ်ယောက်တည်း Super excited ဖြစ်နေတယ်(xD)။ ဟိုးးအရင်အလုပ်ရှာတုန်းက Service ပိုင်းနဲ့ ကန်ဒီနဲ့ ဘယ်လိုမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ ထင်ခဲ့တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ တစ်အချက် ကန်ဒီကစကားနည်းတယ်၊ နှစ်အချက် ကိုယ်က Foreigner ဆိုတော့ အင်္ဂလိပ်စကားကလွဲရင် ကျန်တာမပြောတတ်ဘူး။ သိတဲ့အတိုင်း စင်္ကာပူမှာက အင်္ဂလိပ်၊ တရုတ် (သို့) မလေးစကားတွေ သုံးကြတာဆိုတော့ ဘယ်လိုမှ Service နဲ့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့။ အခုအလုပ်ကို ပြန်သုံးသပ်ကြည့်မိတော့ တစ်နေ့တစ်နေ့လူနာတွေနဲ့ စကားပြောနေရတဲ့ လုံးဝ Service ပိုင်း။ ကိုယ်အဆင်ပြေမယ်မထင်ထားတဲ့အရာက အခုတကယ်လုပ်တော့လည်း ဖြစ်နေတာပဲ။ Flexible ဖြစ်ဖို့တော့ လိုတာပေါ့။ အခုဆို ကန်ဒီတရုတ်လိုလည်း ပြောတတ်နေပြီ။ တော်ရုံတန်ရုံ ဆေးလောက်ကတော့ တရုတ်လိုပြောပြီး ပေးတတ်တယ်။
အဓိကပြောချင်တာက မလုပ်ကြည့်ရသေးခင် ကိုယ်မလုပ်နိုင်ပါဘူးဆိုပြီး လက်မလျော့ဖို့။ ကိုယ့်ဆီရောက်လာတဲ့ အခွင့်အရေးတစ်ခုကို မလုပ်နိုင်ပါဘူးဆိုပြီး လက်မလွှတ်မိစေဖို့။ Why not try first... ^_^
Posted by Candy at 11:28 PM
သကြားလုံးလေးရဲ့ ခံစားချက်လေးတွေ ဖတ်သွားတယ် အနာဂါတ်ကိုမမျှော်ပဲ လက်ရှိရင်ဆိုင်နေတဲ့ဘ၀မှာ အကောင်းဆုံးလုပ်တာ မင်္ဂလာတစ်ပါးပဲပေါ့။ မေမေလာလို့ အဖေါ်မရှိရင် တီတင့်နဲ့တွဲပေးထားလိုက်လေ ... :)
Congratulations for your achievement, Candy!! Wishing you every success for your future endeavors!!
ငါ့ညီမလေးကတော်လိုက်တာ... အသူဆိုလဲ super excitedဖြစ်မှာပဲ :D
yeah Why not try first.. ♥
အနာဂတ်အတွက် ရင်ခုန်ရမယ့်သူအခုချိန်ထိ မတွေ့သေးဘူးလား? ၂၆ဆို အပျိုကြီးဖြစ်နေပြီနော်
It's not that easy to love someone :)
i know. All the best to you Candy!!! :)
I can't get it? GGPa
Why not try first?